Falanqaynta falanqaynta leh Microstation Geographics - Geofumadas
Sebtember, 2008 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Qaado kiiska, waxaan leeyihiin tiro ka mid ah sawirrada ee dalka, ee uu saameeyay line xoog ah, aan aqoon waxa kuwanu yihiin, iyaga rinjiyaynta midabyo kala duwan oo ku kaydi file gaar ah.
1 Dhismaha laydhka
Lakabyada waxaa laga abuuri karaa waxa la arki karo, tani waxay noqon kartaa khariidado tixraac ama faylka furan. Looma baahna in la helo mashruuc furan, haddii aan haysto walxo leh sifooyin loo xilsaaray.
Xaaladdan oo kale, waxaan haystaa mashruuca furan, oo weliba waxaan arkay sirqoollada dalka on taas oo aan jeclaan lahaa si ay u falanqeeyaan oo guryaha saameeyo dhidibka of Bedfordshire ah.
Falanqaynta fayaqoolojiyada waxaa lagu hawlgeliyaa "falanqaynta adeegga / falanqaynta". Gudigani waxay u muuqdaan kuwo bedelaya habka loo abuuro, tirtiro, loo diro loona daro lakabyada.
Xaaladdan oo kale, si loo abuuro lakabka jilicsan,
firfircoonida heerka ay ku kaydsan yihiin (ama sifo ay leeyihiin),
Waxaan dooranayaa nooca lakabka (aagga) inkastoo ay noqon karto xariiqyo ama dhibco
markaa waxaan dooranayaa magaca; kiiskan waxaa loo yeeri doonaa "Urb1-15"
Hoos waxaan doortaa nooca line, buuxi midabka iyo xadka. Waxaa sidoo kale loo abuuri karaa iyada oo ku saleysan su'aal (query) iyada oo loo marayo macmiilaha suaalaha ama mid la keydiyay.
Markaas baan ku codsan karaa badhanka "abuuro", isla markiiba kor abuuri lakabka, taas oo ku tusi kara "bandhigay" button. Wakhtigan, lakabka waxaa loo kaydiyay kaliya ee xasuusta laakiin waxa ay keydin karaa sida file .tlr oo lagu tilmaami karo waqti kasta ... xataa aan mashruuca furan.
Haddii aan rabo inaan ku daro khariidada, badhanka "Add" ayaa loo isticmaalaa, tanina waxay ku socotaa heerka la doortay iyo midabada muuqata ama buuxa.
Sidoo kale waxaan sameeynaa lakabka "xariijin sare", taas oo aan doorto heerka heerka. Hadda waxaan haystaa labada lakab, waxa aan rabo hadda waa in la falanqeeyo santuuqyada ay saameeyeen fiilooyinka basaska.
2 Falanqaynta isku dhafka
Falanqaynta waxaa lagu sameeyaa adiga oo dooranaya "hareeraha / xariiqa aagga", ka dibna waxaan dooranayaa lakabka lafaha iyo meelaha la falanqeyn doono. Isla sidoo kale wuxuu noqon karaa "goobo goobaha" ama "meelaha laga barto" xaaladaha kale.
Hoos waxaa ku qoran aniga oo i tusaya qaabka kale ee loo dooranayo lakabka si ay u noqdaan natiijo, waxaan dooranayaa warqadaha (meelaha).
Waxa kale oo aad dooran kartaa qaabka falanqaynta, "xirmi" si fiican ugu habboon, laakiin noocyada kale sida in, baxay, ku habboon iwm
Magaca lakabka keeney waxaa loo qoraa midigta iyo bedelka si loo ilaaliyo xiriirka xogta ee goobaha xilka. Magaca lakabka ayaa noqon doona "Guryaha saamoobay"
In la abuuro lakabka "dhista" xulay, hadda waa lakabka abuuray, ujeedooyin bandhigay waxaa la sameeyaa iyo "bandhigay" button la isku soo riixayo.
Kala duwanaanshahan ma sii jiri Karin Khariidadda Bentley, ama ugu yaraan daaweyntii gabi ahaanba way ka duwan tahay.
Post Previous«Previous Geesooleyaasha dhisayo saleysan fariimahaaga iyo masaafada in miiska Excel ah
Post Next Bentley si ay u bixiyaan siminaaro Geo ee SpainNext »